CUSUB stations Saldhigyada faafitaanka • Saldhigyada nadaafadda gacanta ee METALCO
Rugta wasakhaynta / rugaha nadaafadda gacanta ayaa ah wax cusub oo soo-jeedinteenna ah qayb ahaan dhisme yar. Waa xallin fududeyneysa howlaha jeermiska gacmaha lagu nadiifiyo iyo qashinka.
Soo dejiso buugaagta iyo liiska qiimaha >>
Dhaqida iyo jeermiska gacmaha Kuwani waa waxqabadyo muhiim u ah ka hortagga wax ku oolka ah ee faafitaanka bakteeriyada pathogenic iyo fayrasyada, oo badanaa lagu soo bandhigo maqaarka gacmaha.
Gaar ahaan xilligan adag fayruuska xanuunka musiibada ah ee Coronasi wax ku ool ah oo loo fuliyey nidaamyada nadaafadda iyo jeermis-ka-qaadista gacanta ayaa si weyn wax uga taray yareynta caabuqyada iyo yareynta faafidda cudurada, iyo tan maaha kaliya xarumaha caafimaadka, laakiin sidoo kale dukaamada, goobaha laga dukaameysto, matxafyada, dhirta warshadaha, kafateeriyada, hoteelada iyo maqaayadaha, yacni meel kasta oo ay ku nool yihiin kooxo dad ah.
Eeg sidoo kale: Nidaamyada qaladka ah ee lagu nadiifiyo qolalka iyadoo la adeegsanayo habka ceeryaanta qallalan
Dhaqida joogtada ah ee joogtada ah iyo jeermiska gacmaha ka hor intaan la gelin meel fagaare ah oo xiran, iyo sidoo kale inta lagu jiro shaqada, dukaamaysiga iyo waxqabadyada kale waxay keeneysaa in si wax ku ool ah looga qaado sunta iyo jeermiska cudurada keena dusha gacmaha.
Fayrasyada badankood, oo ay ku jiraan coronavirus ee keena cudurka Covid-19waa silsilad RNA daboolay oo leh xuub dufan leh, taas oo fududeynaysa ka-hortagga faafitaankiisa iyo cudurkiisa iyadoo la adeegsanayo kiimikooyin sida saabuun iyo jeermis-dileyaal.
Ururka Caafimaadka Adduunka waxay kugula talineysaa gacmo dhaqid sax ah saabuun iyo biyo ugu yaraan 30 ilbiriqsi iyo adeegsiga u diyaarinta jeermisyada ku saleysan min. 60% aalkolo.
Intaa waxaa sii dheer, naftaada waad ka ilaalin kartaa caabuqa adoo adeegsanaya galoofyada la tuuro, maaskaro daboolida sanka iyo afka sidoo kale Dharka jeermiska jeermiska sagxadaha ugu badan ee la taabto ama taabto.
Nidaamka dhaqida saxda ah iyo jeermiska gacmaha ayaa yareynaya dhirta microbial flora ee ku jirta maqaarka gacmaha iyadoo la isticmaalayo jeermiska jeermiska.
Ku tirtirka jeermiska diirka maqaarka gacmaha waa inuu qaataa illaa 30 ilbiriqsi oo waa inaadan ilaawin xaddiga ku habboon ee diyaarinta, iyo sidoo kale jeermiska ku disha meelaha ay adag tahay in la gaaro gacmaha, yacni meesha u dhexeysa faraha.
Dhaqida joogtada ah iyo jeermiska gacmo nadiifinta ee jirka, in kasta oo ay xaqiiqda muhiim u yihiin nabadgelyadeenasi kastaba ha noqotee, waxay qalajiyaan maqaarka gacmaha, taas oo sababi karta falcelin xasaasiyadeed iyo maqaarka oo barara. Si loo yareeyo saameynta xun ee jeermiska loo isticmaalo maqaarka gacmaha, diyaargarowga qoyaanka gacanta ee habboon waa in la isticmaalo.
Dhaqida gacmaha, isticmaal alaabada maqaarka u fiican.
Cudurrada faafa Hadda loo isticmaalo jeermiska waa diyaargarowga ku saleysan ethyl ama propyl aalkolada. Kuwa ugu fiican ayaa sidoo kale ku jira walxo qoyan.
Saldhigyada jeermiska ka-hortagga ee birta
Qalabka keena saabuunta iyo jeermis dilayaasha ay soo jeedisay Metalco ayaa ogolaanaya qibrad la-aan xiriir la lahayn ee jeermis habboon oo tayo sare leh.
Saldhig buuxa oo COLOMBO
Saldhigyada nadaafadda (goobaha nadaafadda) waa xalal ficil oo xarrago leh, oo ku habboon in lagu isticmaalo qol kasta.
Qalabkayaga waxaa loogu talagalay inay yihiin saldhigyo gacmo nadiifiyayaal iyo barta wax lagu qeybiyo ee waxtar u leh xakamaynta fiditaanka COVID-19, sida galoofyada, maaskaro ama maro.
Saldhigga wasakhaynta ayaa sidoo kale lagu qalabeeyay weel bir qaas ah oo gaar ahoo fuliya howlo qashinka qashinka.
Saldhigyada jeermiska lagu dilo ee 'Metalco' waa nidaamyo fudud oo dareen leh oo ku habboon meelaha dadweynaha iyo meelaha gaarka loo leeyahay, sida xafiisyada, xarumaha wax laga iibsado, iskuulada, jimicsiyada, makhaayadaha iyo kuwo kaloo badan.
Intaa waxaa sii dheer, xarunta jeermis-dileyaashu waa aalad muhiim u ah taageeridda xaaladaha shaqada nadaafadda goobta shaqada iyo ilaalinta shaqsiyaadka shaqaalaha, iyadoo la waafajinayo borotokoolka wasaaradeed ee nidaaminaya tallaabooyinka lagu dhimayo faafitaanka coronavirus goobta shaqada.
Xallinta loo adeegsado saldhigga jeermiska jeermiska ee loo yaqaan 'Metalco Station Station' waxay u oggolaaneysaa fududeynta ugu badan ee hawlgalka aaladda jeermiga jeermiska, Qashinka fudud iyo nadaafadda oo idaacadaha ka dhig kuwo wax ku ool ah oo xarrago leh, oo weliba ku habboon in lagu isticmaalo gudaha gudaha.
Weelka qashinka ayaa u oggolaanaya ururinta nadaafadda iyo qashinka.
Qaybta saldhiga jeermiska jeermiska ee Matalco waxaa ka mid ah:
Qalabka diyaarinta gacanta
galoofyada la tuuro
Cabbirada saldhiga jeermiska jeermiska (nooca leh cagaha):
Awooda liner gudaha: 60 lt
Miisaan: qiyaastii 28 kg
Dhismaha xarun lagu daweeyo jeermiska
Mashiinnada ka-hortagga ee loo yaqaan 'Metalco disinfection' waxay ka samaysan yihiin bir bir ah ama bir aan la jaanqaadi karin, oo leh gole hore oo leh hal midab, halka darbiyada dhinaca laga heli karo 7 midab oo kala duwan.
COLOMBO Saldhig buuxa - nooca birta aan lahayn
Saldhigyadan jeermiska lagu dilo waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo gudaha waxaana lagu heli karaa laba nooc:
oo leh qaab dibadeed oo gabi ahaanba laga sameeyay bir aan kala maarmin
oo leh qaab dibadeed oo ka samaysan budo isku-xidhan, oo horena leh qaab dhammaystiran
Waad ku mahadsan tahay isticmaalka mashiinnada jeermiska si tooska ah loogu isticmaalo meelaha dadweynaha iyo dhismayaasha shirkadaha, xarumaha iyo goobaha shaqada way suurtogal tahay Jeermiska gacmaha aan lala xiriirin.
Qaybta aasaasiga ah waxaa ka mid ah:
godad horay loo meeleeyay oo ku yaal darbiga hore
qol leh albaab albaabka hoos loo dhigay iyo gacan ku haynta qalabka loo baahan yahay (unugyada, galoofyada la tuuro, maaskaro)
albaab hore oo leh laba furitaan oo qashin ah
hoosta hagaajin kara
MAGELLANO Xalka la waafajin karo
Marka uu macmiilku codsado, waxyaabaha soo socda ee dheeraadka ah waxaa loo dhiibi karaa:
toosiiyaha tooska ah
Gacanta birta birta ah ee caalamiga ah
afar ABS giraangiraha bedelkii cagaha la hagaajin lahaa
Xarunta faafinta cudurka 'CABRAL'
Waa xalka ficil iyo xarrago leh ee ku habboon gudaha iyo / ama dibedda.
Bixiyuhu wuxuu ka kooban yahay tuubbo aluminium ah oval sideed litir weelka jeliyaarka dilaaga ah iyo guri aluminium ah oo guban kara bir daxaleyn bir / guluubka chrome.
Saldhig iskaa ah wuxuu ka samaysan yahay bir bir lagu duubay oo leh dhammaystir ka kooban budada sida koronto-darka.
Marka loo adeegsado xeebta, waxaa suurtagal ah in la geliyo qolka miiska miiska lagusoo diro, oo sidoo kale laga sameeyay aluminium, gudaha tuubbo oval ah oo leh lakab ka kooban shey dahaar ah iyo fur leh nal daboolaya ciidda.
Mashiinka jeermiska kahortagaSaldhig gacmeed jeermis dilidDHEXEXarun aan lala xiriirin oo ku takhalusma gacantaxiriiriye aan xiriir lahaynAlbaabka jeermiska dilitaankaAlbaabada wasakhooyinkaGacanta jeermiskaSaldhig buuxa oo COLOMBOjeermis-dilisjeermiska gacantaSifeynta gacanta farmasigajeermiska gacantaku fidinta jeermiska gacmahajeermiska timaha timaha lagu dilojeermiska gacmaha iyo aaladdaTilmaamaha jeermiska dilista gacantajeermis dilista goormatalaal talaal talaalka jeermigaayliffe gacanta jeermiskadilista jeermiska gacanta pdfjeermiska gacmaha lagu nadiifiyou diyaar garowga jeermiska jeermiska gacantajeermis dilista ka hor ururinta dhiiggajeermis gacmeedka ilmaha dhasha ahRossmann jeermis dilistanidaamka jeermiska dilista gacantajeermiska cudurka schulke ee jeermiskajeermiska gacmahajeermis-dilis gacmeed ku jirta salaan qurxintajeermiye gacanta jeermiska calooshajeermis dilista gacanka dhexdiisajeermiska gacmaha lagu daaweeyo ee cisbitaalkajeermiska gacanta sida laga soo xigtayFududeeyaha CABRALJeermiska ecolab ee jeermiskaNadiifinta gacanta nadaafaddanadiifinta gacmaha iyo qalliinka gacantanadiifinta nadaafadda iyo jeermiska gacmahaGacmo nadiifin iyo jeermis dilisgaloofyada la tuuromarka jeermis dilista gacmahaMAGELLANO Xalka la waafajin karomaaskarodhaqitaanka jeermiska gacmahadhaqida iyo jeermiska gacmahaku soo maydhay gacanta iyo jeermis-diledhaqida iyo jeermisyada gacmaha iyadoo la adeegsanayo habka ayliffedhaqitaanka gacmaha iyo habka jeermiskamaydhista iyo jeermis-ka-qaadista gacmaha ee jikada qurxintadhaqitaanka iyo jeermiska gacmaha lagu dilo ee cisbitaalkaGacmo dhaqista iyo jeermis-dilaaga iyadoo la raacayo farsamada Ayliffedareere loogu talagalay jeermiga gacmaha lagu nadiifiyo ilmaha dhashayJeermiska gacanta oo habboongoobta fayadhowrkanadiifinta gacmahaschulke gacanta jeermiskamaro lagu nadiifiyojeermiska gacantaJeermiska maqaarka ee jeermiska dilaNoocyada faafa ee cudurkaCudurrada faafaXarunta faafintaXarunta faafintaSaldhigga jeermiska jeermiska gacantaXarunta nadaafaddaXarunta nadaafaddaRugta wasakhayntaRugta wasakhayntaSaldhigyada jeermiska ka-hortagga ee birtaRugta wasakhayntaSaldhigyada nadaafaddaceeryaamo qalalanjeermi gacan ku dilisCadee sababta kansarka u-faafitaanka kansarka uu muhiim ugu yahay shaqada timo-jarahaVESPUCCIkansarka jeermiska dilaSaldhigga gacan-ka-isteerista gacanta ee madax-bannaanKu celcelinta gacmo nadiifiyaha nadiifka ahjel kahortaga kansarka